‘कोरोनाको खोपको विकल्पमा मास्क’ – Health Post Nepal
२०७७ असोज १० गते १६:५९
डा. ओममूर्तिको सुझाव : हृदयघात हुन नदिन अपनाउनुहोस यी १० साधारण उपाय
सुरुका दिनमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले आम मानिसले मास्क लगाउन नपर्ने जनाएको थियो। स्वास्थ्यकर्मी र संक्रमित व्यक्तिले मात्र मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरेको थियो।
तर, अनुसन्धान र अवलाेकनहरूले मास्क प्रयोगले संक्रमण दरलाई प्रभावकारी रूपमा घटाएको देखियो।
यसै सन्दर्भमा गत मार्चमा ब्रिटिस मेडिकल जनरलमा एक लेख प्रकाशित भएको थियो।
यदि मास्कले थोरै भए पनि संक्रमणबाट जोगाउँछ भने मास्क प्रयोग गर्नुपर्नेमा लेखको विशेष जोड थियो। मास्क लगाउँदा अरू जोखिम हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन।
सही तरिकाले प्रयोग नगर्दा पनि त्यस्तो जोखिम हुने प्रमाण आजसम्म भेटिएको छैन। श्वासप्रश्वाससँग समन्धित सरूवा रोगहरू, पुराना भाइरल संक्रमणको अध्ययनहरूलेे मास्कबाट संक्रमण हुन जोगाउँछ भन्ने पहिलादेखि देखाउँदै आएको छ।
कोरोनामा त नयाँ अनुसन्धान हुनुपर्‍यो। तर, कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो संक्रमणमा मास्क प्रयोगले फाइदा देखाएको छ।
जुन लेखको प्रमुख आशय मास्कको प्रयोग केन्द्रित थियो। तर, त्यतिबेलासम्म खुलेर संसारमा मास्क लगाउन जरूरी छ भन्ने कुरा आएको थिएन।
पुराना अनुसन्धानबाट संक्रामक रोगको संक्रमणलाई मास्कले रोक्छ भने अनुसन्धानबाट प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा कोरोनाको भाइरसलाई किन रोक्दैन?
विस्तारै मास्ककाे प्रयोग हेर्दै जाँदा प्रभावकारी नै रहेको पाइयो। अमेरिकन संस्था सिडिसीले कपडाको मास्क भए पनि लाउँदा प्रभावकारी हुने जनायो।
त्यसपछिका अवलोकन र अनुसन्धानले मास्क प्रयोगको आधारलाई झन् बढाउँदै गयो। अहिले विश्वमा जुनसुकै राष्ट्रमा मास्क लगाउँदा कोरोना संक्रमण घटाउँँछ भन्ने तथ्य आएको छ।
एक सताअघि मात्र न्यु इन्डियन जर्नरल अफ मेडिसिनले एक लेख प्रकाशित गरेको थियो। कोरोना खोपको विकल्प रूपमा आज मास्कलाई हेरिएको छ।
विभिन्न वैज्ञानिक आधार समेटेर खोप नआएसम्म विकल्पको रूपमा मास्क नै रहेको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि जनाएका छन्।
यदि हामीले जुनसुकै मास्क लगाए पनि संक्रमणबाट बच्ने मात्र होइन, कोरोना जटिलताबाट जोगिन सकिन्छ। कुनै व्यक्तिले मास्कको प्रयोग गर्दा कोरोना संक्रमण हुने सम्भावना कम हुन्छ। संक्रमण भइहालेको खण्डमा पनि जटिल अवस्था हुने सम्भावना कम हुन्छ।
उदारहणका लागि हेर्दा कुनै व्यक्तिसामु कोरोना संक्रमित व्यक्ति बस्यो। दुवै जनाले मास्क प्रयोग गरेका छन् भने। कुनै पनि मास्कले एक सय प्रतिशत नै भाइरस त छेक्दैन। साधारण मास्कको प्रयोग गर्दा पनि मुखबाट निस्कने थोपा, खोकीका छिट्टा मास्कले छेक्छ र बाहिर फिल्टर भएर निस्किने अंंक म हुन जान्छ।
जसका कारण संक्रमणको डोज शरीरमा कम छिर्न जान्छ। शरीरमा भाइरस अशं कम छिर्यो भने संक्रमणको तीब्रता कम हुने सम्भावना कम पुराना संक्रामक रोगको अध्ययनले देखाएकाे छ।
सबै जना मानिसले मास्कको उचित प्रयोग गर्नाले कोरोना संसारबाट लोप हुने दिन पनि आउन सक्छ। मास्कको प्रयोगले संक्रमणको तीब्रता पनि घटाउने भएका कारणले खोप नआएसम्म मास्कलाई नै खोपको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्दछ।
मास्क प्रयोगको दुई प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। कोही व्यक्ति तपाईको नजिक आए खोकी, हाच्छ्यिुँ वा बोलिरहेको छ भने आँखाले नदेख्ने मसिना पानीका थोपाहरू हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्छ। जुन संक्रमणबाट रोक्ने काम मास्कले नै गरिरहेको हुन्छ।
त्यसैगरी, वातावरणमा इन्फेक्सन छ भने त्यो इन्फेक्सन सिधै हामीले लियौं भने हाम्रो शरीरमा संक्रमण आउन सक्छ।
त्यसकारण मास्क लगाउनुभन्दा अघि हात सफा हुनुपर्दछ। स्यानिटाइजटर वा साबुन पानीले मास्क लगाउनुभन्दा र खोल्नुभन्दा अगाडि अनि खोलिसकेपछि हातलाई सफा गर्नुपर्दछ।
कुनै कारणले मास्क मिलाउनको लागि छुनुभयो भने त्यसबेला पनि हात सफा गर्नुपर्दछ। किनभने हातमा संक्रमण छ भने मास्कमा आउनुभएन, मास्कमा संक्रमण छ भने हातमा आउनु हुँदैन। अधिकांश मानिसले आज पनि सही तरिकाले मास्क लगाएको देखिँदैन।
कस्तो प्रकारको मास्क लगाउने?
जुनसुकै प्रकारको मास्क लगाए हुन्छ। तर, नाक र मुख राम्रोसँग छोपेर लगाउनुपर्छ। आवश्यक अवधिसम्म लगाउनुपर्छ।
कुनै व्यक्ति बाहिर नस्किएको छ भने घर नपुगेसम्म मास्क लगाइरहनुपर्छ। बीच-बीचमा खोल्नुहुँदैन।
हामी मास्कको प्रयोग त गर्छौं। तर, बीचमा खोल्ने र लगाउने गर्दा मास्कको प्रभावकारिता घट्न जान्छ। अनावश्यक रूपमा सावधानी नअपनाई मास्क खोल्दा संक्रमण त्यहीँबाट सर्न पनि सक्छ।
त्यसकारण हामी घरबाहिर निस्कियौं भने एकछिन पनि मास्क खोल्नुु हुँदैन।
संक्रमणबाट जोगिन पनि स्वास्थ्यकर्मीले १० घन्टासम्म पानी नखाई वा पिसाब पनि नगरी मास्क प्रयोग गर्दै आएका छन्।
अहिले सबैभन्दा प्रभावकारी मानिएको केएन-९५ मास्क हो। तर, केएन-९५ मास्क राम्रो ढंगबाट लगाइएन भने काम गर्दैन। जसका लागि हावा पुरै टाइट भएर जानुपर्छ। श्वास फेर्न गाह्रो भए पनि लगाउनुपर्छ। केएन-९५ मास्क स्वास्थ्यकर्मी र उच्च जोखिम पेसामा रहेका लागि बढी उपयुक्त हुन्छ।
सर्वसाधारणले केएन-९५ मास्क र सर्जिकल मास्क लगायौं भने पनि प्रभावकारी हुनसक्छ। कपडाको मास्कले पनि केही हदसम्म संक्रमण सर्नबाट बच्न सकिन्छ।
केएन-९५ मास्क हुँदैमा संक्रमणबाट जोगिने होइन। केएन-९५ मास्क छ भन्दैमा कुनै व्यक्ति बेला-बेलामा फुकालेर कुराकानी गर्छ भने त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन। तर, कसैले कपडाको मास्क नै राम्रोसँग लगाएको छ, जबसम्म बाहिरबाट आउँदैन खोल्दैन, व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्छ भने कपडाकै मास्कले नै संक्रमणबाट जोगाइरहेको हुन्छ।
मास्कको गुणस्तरमा जोड दिनुभन्दा पनि मास्कको ओभरअल प्रयोग गर्ने तरिका बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हाल धेरै स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले मास्क त लगाएका हुन् नि!
स्वास्थ्यकर्मीलाई संक्रमण किन भइरहेको छ भने मास्कको उचित प्रयोग भएन वा गुणस्तर राम्रो नहुनाले हो।
जो उच्च जोखिममा रहेर काम गरिरहेका छन् उनीहरूका लागि गुणस्तरयुक्त मास्क चाहिन्छ। केही दिनअगाडि अमेरिकन रिपाेर्टमा चाइनिज केएन-९५ मास्कमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीमा समस्या रहेकाे कुरा आएको छ।
मास्कको हामी गुणस्तर निर्धारण गर्न सक्दैनौं। जुनसुकै मास्क लगाए पनि त्यसको लगाउने तरिका र व्यवस्थापनले संक्रमणबाट जोगाइरहेको हुन्छ।
(मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलसँग हेल्थपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंले गरेको कुराकानीमा आधारित)
Tags: डा. ओममूर्ति अनिल, मास्क